Kulankii Golaha Shacabka oo goordhaw Furmay
Waxaa goor_dhow furmay kulanka guud ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kooramka kulanka ayaa ku furmay 142 mudane, waxaa shir guddoominaya kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye ku xigeenka koowaad mudane C/weli Sheekh Ibraahim (Muudeey).
Ajendaha Kulanka maanta ayaa ah Akhrinta 2-aad ee Hindise-Sharciyeedka Batroolka.
Xildhibaanadda Golaha Shacabka Oo Maanta Kulan ku yeeshay Xarruunta Golaha Shacabka
Xildhibaanadda Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen magaaladda Muqdisho
Kulanka waxaa shir gudoominaayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan,waxaana kulanka soo xaadiray 140 xildhibaan.
Ajendaha kulankoodii maanta ayaa ahaa sii wadista dib u eegista wax ka badalka xeer hoosaadka Golaha Shacabka.
Sidoo kale kulanka waxaa joogay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiwali Ibraahim Shiikh Muudeey.
Qaar ka mid ah Xildhibaanaddii kulanka ka qeyb kalay ayaa soo jeediyay in qaar ka mid ah xeer Hoosaadka Golaha shacabka wax ka badal lagu sameeyo.
Ugu dambeeyntii kulanka waxaa soo xiray Guddoomiyaha golaha SHacabka.
Xildhibaanadda Golaha Shacabka oo Maanta kulan Leh magaaladda Muqdisho
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu ku began tahay 24-ka bisha September 2018, kulan ku yeelanaya Magaalada Muqdisho.
Ajendaha kulanka ayaa ah sii wadista dib u eegista xeer hoosaadka Golaha Shacabka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa maanta soo gabagabeeyay doodii ku saabsaneyd xaalada amni ee dalka gaar ahaan amniga Muqdisho
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
Kulanka waxa shir guddoominaayay guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka koowaad Mudane C/weli Sheekh Ibraahim (Muudeey).
150 Xildhibaan ayaa kulanka soo xaadiray, waxaana xildhibaanada ay soo bandhigeen talooyinkooda ku saabsan arrimaha amniga.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sheegay in talooyinkii ay soo gudbiyeen Xildhibaanada loo gudbinayo guddiga amniga iyo guddiga difaaca ee Golaha Shacabka.
Guddoomiye Mursal ayaa labada guddi faray iney la wareegaan oo ay ka soo shaqeeyaan arrimahaan ku saabsan amniga ee Xildhibaanada ay ka doodeen.
“50 Xildhibaan ayaa hadashay, dhamaan fikradahoodii wa la qoray sida waafaqsan qodobka 57-aad ee xeer hoosaadka Golaha Shacabka ee howlaha guddiyada, dhamaan qoraaladii ka soo baxay doodii xildhibaanada waxa ku wareejineynaa guddiga amniga iyo guddiga difaaca si ay golaha ugu soo celiyaan warbixin dhameystiran .” ayuu yiri guddoomiyaha golaha shacabka.
Xildhibaanadda Golaha Shacabka OO Maanta kulan Ku leh MagaaladdaMuqdisho
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku yeelanaya kulanka 3-aad ee Kalfadhiga 4-aad.
Xildhibaanada ayaa sii wadi doono doodii shalay ee ku saabsaneyd amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga Muqdisho.
Shalay waxaa dooda ka qeyb qaatay oo aragtidooda soo bandhigay 20 Xildhibaan.
sida qorshuhu uu yahay waxa maanta hadli doono oo aragtidooda ku saabsan amniga Muqdisho soo bandhigi doono 27 Xildhibaan oo ka mid ahaa xildhibaanadii shalay is qoray.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Barlamaanka Fedaraalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulankii 2-Aad ee kalfadhigga 4-Aad Ku yeesheen Xarruunta Golaha Shacabka.
Kulanka waxaa shir gudoominaayay gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Shiikh Cabdiraxmaan.
Waxaana Kulanka 2-Aad Kalfadhigga 4-Aad ee Golaha Shacabka Soo xaadiray 168 xildhibaan.
Waxaa sidoo kale kulanka joogay gudoomiye ku xigeenadda 1-Aad iyo 2-Aad ee Golaha Shacabka.
Xildhibaanada ayaa kulankoodii maanta waxa ay kaga doodayeen xaaladda Amni ee Dalka,gaar ahaan xaaaladda Amaanka magaaladda Muqdisho.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Oo Maanta Kulan Ku Leh Xarruunta Golaha Shacabka
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu ku began tahay 17 bisha September 2018, Waxa ay kulan ku leeyihiin Xarruunta Golaha Shacabka.
Kulanka ayaa Xildhibaanada waxa ay kaga hadli doonaan amniga Muqdisho.
Waxaa Maanta Xarunta Villa Hargeysa Lagu Dhaariyey Wasiirada Cusub ee ka Banaanaa Xukuumadda JFS
Muqdisho: Maanta oo sabti ah waxaa Xarunta Villa Hargeysa lagu dhaariyay wasiiradii dhawaan uu soo magacaabay Ra'isul wasaare xasan Cali Kheyre Waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka JFS Mudane Maxamed Mursal Shekh Cabdiraxman, Labadiisa Ku Xigeen iyo Ra'isul wasaare ku xigeenka Dalka Mne. Mahdi Maxamed Guueed Khadar.
Dhaarinta kadib ayuu gudoomiye Maxamed Mursal Shekh Cabdiraxman kula dardaarmay Wasiirada in ay u dhaga nuglaadaan la xisaabtanka guddiyadda Baarlamaanka ay ku sameynayaan xubnaha golaha Wasiirada.
guddoomiye mursal ,gudd Muudey iyo R/W ku xigeen Mahdi
dhaarinta wasiirada cusub
dhaarinta wasiirada cusub1